Izibonelo eziyi-10 Zobuhlakani Bokuhlobisa Ezimpilweni Zethu Zansuku Zonke - uLucidPix
Kukholwe noma ungakukholwa, #ukuhlakanipha okungekhona okwangempela nxazonke zethu! #imvubeauty # 3d # 3dphoto #i #machinelearning #Ukulandula # Usomabhizinisi #ml #Ukuzihambisa
♬ ulimi lwasekhaya lwe-maribou luyancipha - xangeb
Bukela iTikTok yethu ukuthola isifinyezo esisheshayo!
Lapho abantu abaningi becabanga ngobuhlakani bokufakelwa (AI), bacabanga ngemishini ifunda ukucabanga njengabantu kumamuvi we-sci-fi anjenge I-star wars futhi Terminator. I-AI nokufunda ngomshini kungabonakala njengomqondo ongacabangi, ongumbono wekusasa, kodwa empeleni, kunentuthuko ehlukahlukene yamanje yezobuchwepheshe esebenzisa i-AI-konke okunika amandla futhi kusisize senze imisebenzi yethu yansuku zonke. Nalu uhlu lwezibonelo eziyi-10 ezicocekile zobuhlakani bokufakelwa obabamba iqhaza ezimpilweni zethu zansuku zonke.
1. Izinhlelo Zokuzulazula
Uyakholelwa noma cha, ngisho nokuhamba kwakho nsuku zonke ukuya nokubuya emsebenzini kudinga ukusetshenziswa kobuhlakani bokufakelwa. Izinhlelo zokusebenza zokuhamba njenge IGoogle Amamephu isebenzisa i-AI ukuhlaziya ijubane lokuhamba kwethrafikhi. Iphinde ingene izehlakalo ezibikwe ngumsebenzisi, njengengozi yomgwaqo noma ukwakhiwa komgwaqo, ukuze bikezela ukuthi kuzokuthatha isikhathi esingakanani ukufinyelela lapho uya khona futhi isebenzisa lolo lwazi ukuphakamisa indlela esheshayo.
2. Izinhlelo Zokusebenzisa kabusha
Manje ake sithi esikhundleni sokushayela ngokwakho ukusebenza, ukhetha ukuthatha i-Uber ehhovisi lakho. Izinhlelo zokusebenza ze-rideshare zinquma kanjani inani lentengo yakho noma isikhathi sokulinda uma usubiza i-Uber? Impendulo ngukufunda ngomshini, esinye isibonelo sokukhalipha okwenziwe ngobuciko. Ngokusho kwenhloko ka-Uber weMishini yokufunda uDanny Lange, isikhathi sokulinda umgibeli "sisuselwa kudatha evela ezigidini zokuhamba, okuvumela [Uber] ukuthi acabangele amaphethini ajwayelekile avela usuku nosuku."
3. Izithombe ze-3D
Ukuthwebula izithombe ze-3D sekuyindlela ehehayo yokuthwebula nokubonisa izithombe. The Uhlelo lokusebenza lweLucidPix, ngokwesibonelo, ikuvumela ukuthi uthwebule Izithombe ze-3D noma uguqule izithombe ze-2D ku-3D ngaphandle kwesidingo samakhamera amaningi. Okuthuthukile ubuhlakani bokufakelwa ngemuva kweLucidPix iyakwazi ukutshala ukuthi yiziphi izingxenye zesithombe sakho ezinamazinga aphezulu okujula ngokuqhathaniswa nezinye izingxenye zesithombe sakho. Bese, ngokuchofoza inkinobho, I-LucidPix ingeza ukujula kwezithombe zakho futhi izenze izithombe ze-3D ezifane.
4. Ukuqashelwa Ubuso
Izinhlelo zokusebenza ezinjengeLucidPix, Snapchat, ne-Facebook zonke zisebenzisa i-AI kubuchwepheshe bayo bokubona ubuso. I-LucidPix isebenzisa ukubonwa kobuso ukuthola ubuso bomsebenzisi wesici se- “3D Face”, esivumela abasebenzisi ukuthi bamba futhi uguqule ama-selfies abo ezithombeni ze-3D. Ngokufanayo, I-Snapchat isebenzisa i-AI ukubona ubuso babasebenzisi nokusebenzisa izihlungi zobuso ezithombeni zabasebenzisi. Ku-Facebook, ukuqashelwa kobuso kusetshenziselwa ukukhomba ubuso ezithombeni nokumema abasebenzisi ukuthi bazimake bona noma abangani babo be-Facebook.
5. Abasizi Be-Smart
Mhlawumbe ukusetshenziswa okuthandwa kakhulu kwe-AI kuza ngesimo sabasizi abahle zedijithali, njenge Siri, Alexa futhi Umsizi we-Google. Laba basizi bomuntu siqu abanamandla we-AI bayakwazi ukuthatha imiyalo yakho yezwi futhi uyihumushe ezenzweni, njengokufaka izinto ohlwini lwakho lokuthenga noma ukubiza umngani. Akungabazeki ukuthi abasizi bezwi bazoqhubeka nokukhula futhi sibe nekhono ngokwengeziwe lokusisiza ezimpilweni zethu zansuku zonke.
6. Izihlungi Zogaxekile
Unganqikazi ukukholelwa ukuthi i-imeyili yakho engenayo isebenzisa i-AI, kepha kuyiqiniso! Enye yezinto ezibaluleke kakhulu kubhokisi lakho lokungenayo, isihlungi sogaxekile silawulwa iqoqo lemithetho elisiza ukugcina ubungozi bebhokisi lakho lokungenayo lingabi bikho. Ngokuhamba kwesikhathi, okokuhlunga kogaxekile ngokuqhubekayo kufunda kusuka kumasiginali ahlukahlukene, kusukela kumethadatha ye-imeyili kuye kumagama noma imisho ethile ku-imeyili. Gmail ngokwayo iyakwazi ukuphumelela hlunga ama-99.9% ogaxekile ngokusebenzisa umshini wokufunda ama-algorithms.
7. Izincomo Zemidiya
Uma uke waqeda ukusongela uhlelo lwe-TV ku Netflix, kungenzeka ukuthi uqaphele indlela iNetflix ekhombisa ngayo ngokushesha eminye imibukiso ongakujabulela ukuyibuka ngokulandelayo. YouTube kungenye ipulatifomu leyo itusa uchungechunge lwamavidiyo ungahle uthande okulandelayo ngemuva kokuqeda ukubuka ividiyo eyodwa. Zombili lezi zinsizakalo zemidiya yedijithali hlaziya amakhulukhulu amarekhodi ukuphakamisa amafilimu, imibukiso ye-TV, namavidiyo ongawathanda ngokususelwa ekuphendukeni kwakho kwangaphambilini nasekukhetheni kwabezindaba.
8. I-Inthanethi Banking
Amabhange amaningi manje anikezela ngezinsizakalo zokufaka idiphozi kumakhasimende abo, nawo ayasebenzisayo ukufunda imishini. Izinhlelo zokusebenza zebhange ziyakwazi ukubona nokufunda ukubhala kwakho ngesandla ukuhumushela lokho kuhlolwa lwedijithali. Ngaphezu kwalokho, i-AI nayo isetshenziselwa ukunquma ukuthi yikuphi ukuthengiselana okukhohlisayo. FICO, insiza yokufaka isikweletu, isebenzisa ukufunda ngomshini ukuthuthukisa isikolo sakho se-FICO futhi ihlole izinga lobungozi lekhasimende ngalinye elisha. Le mininingwane idluliselwa emabhange ukuze amabhange akwazi nquma ukuthi yibaphi abafaka izicelo ababolekisi abaphephile.
9. Izimoto Ezizimele
Izimoto zokuzishayela nezokupaka, eyaziwa nangokuthi izimoto ezizimele, sebenzisa ukufunda ngomshini ukubona isikhala esiseduze nemoto ukuze ushayela umgibeli ngaphandle kwabo abake balawule imoto. Inkampani yeTech I-Nvidia isebenzisa i-AI ukwenza “[amandla] izimoto ezizimele ukucubungula inani elikhulu lezinzwa nokwenza izinqumo zokushayela zesikhathi sangempela.” kanye nabasebenzisana nezinkampani ezenza izimoto ezifana Tesla, Toyota, I-Mercedes-Benz, Audi, Futhi Volvo.
10. Izinto Zasendlini
Noma izibonelo eziyisishiyagalolunye ezedlule zobuhlakani bokufakelwa zonke zinhlobo zensizakalo noma isoftware, lokho akusho ukuthi i-AI ayifiki imishini yemishini. Futhi ungahle ube nabanye ekhaya lakho! I-IRobot's Roomba vacuum cleaner isebenzisa i-AI ukuskena usayizi wekamelo elikulo, ikhombe izithiyo, futhi inqume indlela ephumelela kunazo zonke yokushanela isikhala.
Isibonelo sethu esithandekayo sobuhlakani bokufakelwa
Ungayifaka kanjani futhi Uyikhiphe kanjani Uhlaka lwe-3D →← Ungasakha Kanjani isithombe se-3D ngombhalo